Ruushka uu hub aan horey loo arag ku tijaabiyay Hawada Sare – Radio Damal
Ruushka uu hub aan horey loo arag ku tijaabiyay Hawada Sare
Mareykanka iyo Britain ayaa Ruushka ku eedeeyay in Hawada Sare uu ku tijaabiyay hub casri ah oo shucaac ah, kaas oo loo adeegsan karo burburinta dayax-gacmeedyada hawada ku sugan.
Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa walaac cusub ku tilmaamtay wax ay ku qeexday “hub u muuqdo mid lagu isticmaali karo Hawada Sare oo lid ku ah dayax-gacmeedyada”.
Wasaaradda Difaaca ee Ruushka waxay sheegtay in ay isticmaashay teknolojiyad casri ah oo ay ku eegeyso sida ay u shaqeynayaan qalabkeeda u yaalla Hawada Sare ee dhulka ka fog.
Mareykanka ayaa horeyba walwal uga muujiyay dhaqdhaqaaqa cusub ee dayax-gacmeedyada Ruushka ee ka socda Hawada.
Balse waa markii ugu horeysay ee UK ay eedeyn u jeediso Ruushka oo ah inuu tijaabinayo hub Hawada Sare dhexdeeda uu ku riday.
Maalmo ka hor, baaritaan laga sameeyay Britain waxaa lagu ogaaday in dowladda UK “ay si wayn u yareysatay” halista Ruushka uu sababta u noqon karo.
War-qoraal ah oo Khamiistii ka soo baxay Kaaliyaha Xoghayaha Amniga Qaranka Mareykanka, Christopher Ford, waxaa lagu sheegay in xukuumadda Moscow ay “manaafaq tahay” ka dib markii ay dalbatay in la xakameeyo hubka ku sii ballaaranaya Hawada Sare.
“Moscow waxay dooneysaa in ay awooddeeda sii xoojiso iyadoo si cad u dooneysa in ay xakameyso midda Mareykanka, dhankeedana ay sii wadato,” ayuu yiri kaaliyaha.
Madaxa Guddiga arrimaha hawada ee UK, Harvey Smyth, wuxuu sheegay in uu ka walwalsan yahay tijaabadii ugu dambeysay ee Ruushka uu sameeyay, taas oo uu ku tilmaamay “in qaab hub halis ah ay lahayd”.
“Ficilladan oo kale waxay halis gelinayaa amniga Hawada Sare, waxaana halis noqonaya firirka ka dhasha oo ku dhici kara dayax-gacmeedyada iyo hannaanka hawada ee dunida ay ku tiirsan tahay,” ayuu yiri.
Wuxuu Ruushka u sheegay in ay “masuuliyad iska saaraan arrintan” iyo in ay “ka fogaadaan tijaabo noocan ah oo mustqbalka ah”.
Ruushka, Mareykanka, Britain iyo Shiinaha waxay ka mid yihiin 100-ka dal ee saxiixay heshiiska Hawada Sare oo qeexaya in cilmi-baaris cusub loo adeegsado iyo in si nabad ah oo keliya lagu wada joogo.
Heshiiska wuxuu sidoo kale dhigayaa in hub aan la geyn karin Hawada Sare.
Mareykanka wuxuu sheegay in hannaanka dayax-gacmeedka Ruushka ee hadda tijaabada sameeyay uu yahay midkii ay walaaca ka muujiyeen sannadkii 2018-kii, iyo horraantii sannadkan xilligaas oo Mareykanka uu sheegay in qalabkaas uu ku dhowaaday dayax-gacmeed uu Mareykanka leeyahay.
Gen Jay Raymond, oo ah taliyaha Hawada Sare ee Mareykanka, oo ka hadlay tijaabadii ugu dambeysay, wuxuu sheegay in caddeyn loo hayo in Ruushka “uu Hawada ku tijaabiyay gantaal lid ku ah dayax-gacmeedyada”.
Gen Raymond wuxuu intaa ku daray: “Tani waxay caddeyn dheeraad ah u tahay in Ruushka uu sii wado dadaalkiisa uu ku casriyeynayo kuna tijaabinayo hubka Hawada Sare, waxayna Kremlin-ka sii wadaa cilmiga ay hub cusub halkaas ku geyneyso oo halis ku ah hantida Mareykanka iyo xulafadiisa ee halkaas u taalla.”
Tijaabada gantaalka cusub ee Ruushka waxaa la sameeyay 15-kii bishan July, iyadoo ujeedadu ahayd xaqiijinta qalabka dalkaas ee hawada sare u yaalla, sida laga soo xigtay Wasaaradda Difaaca Ruushka.
“Tijaabadii ugu dambeysay ee teknolojiyadda Hawada Sare waxaa lagu xaqiijinayay mid ka mid ah dayax-gacmeedyadeena oo lagu xiray qalab casri ah,” ayey tiri wasaaradda oo warkeedaas lagu qoray Wakaaladda Wararka ee Interfax.
Waxaa intaa lagu daray: “Baaritaanka macluumaadka qiimaha leh ee ku saabsan xaaladda farsamo ee shayga la tijaabiyay weli way socotaa”.